शब्दकोश: March 2010
पाहुनाको कलमलाई क्याफेमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा 'अतिथि आसन' स्तम्भमा यसपालि कवि सुको साइबरलाई लिएर आएको छु । सुको अर्थात् सुदिप कोइराला । कवि साइबर मेरा समकालीन हुन् । उनको कवितामा मैले सधैँ अनुभूति गर्ने पाटो अभिव्यक्ति शिल्पमा बिछट्टै नयाँपन नै हो । सरल विषयवस्तु र कथ्यमा गम्भीर चाबुक दिनु साइबरको कलमको जग हो । यो एउटा कविको लागि (जो कोही लेखककै लागि) अपेक्षित गुण हो । यसैले समकालीन युवा कविहरूको भीडबाट कवि सुकोलाई नै अतिथिको रूपमा उभ्याउन मलाई लोभ लाग्यो । उनी हाल नयाँ कविताकिताब प्रकाशन तयारीका लागि कविताहरूको जोरजाममा लागेका छन् । निकट भविष्यमै उनको कृति आउँदैछ । त्यो उनको गन्तीको हिसाबले दोस्रो र एकल लेखनको हिसाबले पहिलो किताब हुनेछ ।
कविता लेखनमै समर्पित रहँदै आएका उनको एउटा ताजा कविता क्याफेमा प्रस्तुत छ :
घामले पोल्न सक्छ
पानीले निथ्रुक्कै रुझाउन सक्छ
धुलो उड्न सक्छ
हिलो हुन सक्छ
ठेस लाग्न सक्छ
हिँड्नुअघि नै सोच्नुपर्छ
बाटो उही हुन्छ
बदलिसकेको हुन्छ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, March 29, 20106: Comments
गोरखा दरबार उक्लिँदै गर्दाको सूर्यास्त
अटेसमटेस गाडी, गर्मी उस्तै, मनास्लु हिमालले पङ्खा हम्किरह्‌यो
देख्‍नमा मनमोहक, जोखिमयुक्त बाटो
तरेली परेका खेतका गह्रा
इस्तुल खोला तरेर
आरुघाट बजारमाथिको गाउँ
आरुघाट बजारमा गिट्टी कुट्दै आमै
नामै पुतली : आरुघाटकी पुतली
यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरै’छु : बिहानपख टोलाउँदै परेवा
सङ्घर्ष पाइलैपिच्छे : ट्रकमा चढ्न सकस झेल्दै धादिङको हनुमानडाँडानिर
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, March 27, 20109: Comments
Labels: गाउँघर, तस्बिर, यात्रा
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, March 26, 20102: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, March 22, 20106: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, March 20, 20106: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, March 17, 2010 8 : Comments
साँझहरू कस्ता हुन्छन् ? पक्कै पनि अलि शीतल, मादक र भावयुक्त । ती, मन पराइने रूपमा अतीतका पलहरू स्मरण गराउँदै हामीमाझ लरबराउँदै आएका हुन सक्छन् । साँझ जस्तै मीठो र भावमयी कविताको परिकार चाख्‍ने इच्छा कवि रमेश क्षितिजको 'अर्को साँझ पर्खेर साँझमा' कविताकिताब समाएपछि शान्त हुन सक्छ । किताब पुरानो हो, २०५७ सालमा प्रकाशित । तर काव्यिक सुगन्धले उमेरको बूढोपन छोडेर जीवन्त संवाद गर्छ । लोरीको भाकामा कवितामा धुन खिप्‍न सिपालु कविले सरल अभिव्यक्तिशैलीबाट गहन अर्थ दिने बाटो समाएको देखिन्छ ।
शब्दजालका भद्दा संगठनबाट क्षितिजका कविताहरू परै बस्छन् र साउतीका स्वरहरू सुसेल्दै पाठकलाई सम्मोहन पैदा गर्छन् । 'आफ्नो कुरा' शीर्षकको भूमिका खण्डमा कविले लेखेकै पनि छन्- "अनुहार हराउनेलाई अनुहार दिने कलात्मक तर नि:शब्द ऐनाजस्तो होस् कवितामा विचार - मैले कामना गरेको हुन्छु ।" नभन्दै दुरुस्तै आफ्नो कामनाअनुरूप अनुहारसहित हाजिर भएका भेटिन्छन् कवितामा कवि । आत्मीयता पैल्याउन सक्ने कविको खुबी र कविताको गुणले होला, कविता पठनसँगै एउटा सम्बन्ध स्थापित भइसक्छ कवि र पाठकबीच । अझै, विम्ब र अलङ्कारहरूको घना उपस्थितिले कविताभित्र सङ्गीतिक लहर तरङ्गिएको आभास हुन्छ ।
हातमा लिएर हेर्दैछु
एउटा तस्वीरको पत्ती
र खेल्दैछु तर्कनाहरूको तास !
कि तस्वीरहरू कहिल्यै पुराना नहुँदारहेछन् ?
एक वर्षअघि सँगसँगै हिँड्ने
त्यो मायालु सोझो मित्र
कहाँ पुगेर के गर्दै होला ?
अङ्कअङ्क हिसाब गर्दैछु
थाहै नपाएर चिप्लिएछ एक वर्षको जोकर समय
- (तस्वीर, पृष्‍ठ २८)
कवितामा देश र समाजको चिन्ता र चासोजत्तिकै प्रगाढ रूपमा मानवीय मूल्य, अस्तित्वबोध र हार्दिकता अँटाएका छन् । त्यसै गरी प्रकृतिचित्रणमा पनि कवि निर्धक्क भई पोखिएका छन् । त्यस क्रममा बलियो औजारको रूपमा कलात्मकता प्रशस्त खर्चिएको पाइन्छ । उपमाको साथै खासगरी रूपक अलङ्कारको निकै जतनसाथ प्रयोग भएको छ ।
जब पग्लिन्छ आँसु आकाशको
रुझेर पहाड सोचमग्न हुन्छ
उही अगस्त ९ सम्झिरहेको नागासाकीको
राष्‍ट्रवादी नागरिक जस्तो
- (झरी, पृष्‍ठ १३)
३८ थान कवितामा हुलाकघर कविताशृङ्खला विशेष स्मरणीय छन् । पाँच शृङ्खलासम्म तन्किएका 'हुलाकघर' कविताला ई कविले हुलाक सेवामा जागिरे जीवन बिताउँदाको महत्वपूर्ण आम्दानी हो भन्दा हुन्छ । झरी पर्दा हुलाकघर सङ्कटमा परेकी अबला महिला जस्तो देख्छन् कवि, जहाँ हुलाकघरको छानाबाट निरन्तर चुहिँदै गरेको पानीलाई आँसुसँग दाँज्छन् उनी । त्यो आँसु बग्दै लतपतिएर 'सुन्दरी खामका आँखाका गाजले ठेगानाहरू' अस्पष्‍ट पार्ने कविले गरेको कलात्मक वर्णन र नौलो कल्पनाशक्ति निकै कलाकारी खुबीले ओतप्रोत भएको महसुस हुन्छ । सर्पजस्तो गुडुल्किएर सुतेको गोरेटो, कुम फाटेको गरिबी, बैरङ्ग चिठीजस्ता घुमन्ते, सूर्यास्तजस्तो जिन्दगी, खुम्चिएको सिरकको खोलजस्तै अनुहार, पहाडले मस्तसँग चुटोट पिएर धुँवा (बादल) उडाएको आदि प्रयोगले कवितामा बाँधिइराख्‍न सुनौला रेखी कोर्न सक्छन् पाठकलाई ।
कालो चश्‍मा लगाउने मान्छे
देख्छ - धमिला पहाड
र कालो अङ्गारको झरी
खाली कालो घाम देखेको उसले
हिँडिरहेका कर्मशील कमिलाहरूको पङ्क्ति
र इन्द्रेनीजस्तो रङ्गीन जिन्दगी
(चश्मा, कालो-२, पृष्‍ठ ४७)
कलामा विचारको वेग मिसिएको स्वादिला कविता पढ्न रुचाउनेहरूको लागि रोजाइको एउटा नाम बन्न सक्छ रमेशको 'अर्को साँझ पर्खेर साँझमा' ।
फुटकर रूपमा प्रकाशित उनको कविता ‘पाण्डुलिपि हराएको दिन’ पढ्न यहाँ जानुहोला ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, March 15, 20103: Comments
धेरैजनालाई लोडसेडिङका कारण घरै अँध्यारो संसारै अँध्यारो लाग्छ । यस पङ्क्तिकार मनुवाको नजरमा भने लोडसेडिङको धारावाहिक बहार अति प्यारो जिनिस बन्न थालेको छ । यसो भन्दा चिया पसलमा सडकदेखि बिजुली र पानीसम्मको विकासे वार्ता हाँक्ने आदर्शका स्वघोषित ठेकेदारहरूको क्रोधको भोल्टेज एक्कासि 'हाइ' होला । तर यहाँ कसैलाई पीर पार्ने कुरा उछाल्नु छैन, बरु लोडसेडिङको कालो ओढारभित्र पनि सन्तोष मान्न सकिने आविष्कारिक उज्यालोको एकाध सूची धेरथोर सुझाउनु छ ।
उज्यालो एक -
मौलिकतामा जोसुकैलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ, यही सत्य हो । जससँग मौलिकता हुन्छ ऊ नै आजको समाज अनि भीड-बजारमा अरुभन्दा विशिष्ट अनि अलग्गै किसिमको सम्पदाको धनी कहलिन्छ । प्रस्टै छ, हाम्रा धेरैधेरै मौलिकतामध्ये एक हो लोडसेडिङ । अतः हामी पनि विश्‍वबजारमा विशिष्‍ट छौँ भन्नेमा शङ्का छैन । अन्यत्र कतै छ र यस्तो दिनदिनै र छिनछिनै प्राप्‍त हुने अन्धकाररुपी सित्तैको लड्डु ?
यसै कारण हाम्रो यो मौलिकतालाई हामीले माया नगरी हु“दै हुन्न । कारण, हाम्रो यही मौलिकता नै एकमात्र श्रीसम्पत्ति हो । आफ्नो स्थानीय पहिचान हो । गर्वलायक अरु केही उपाय नभएपछि कुनै एउटा बहानामा सन्तोष मान्नु सकारात्मक सोच पनि हो ।
उज्यालो दुई -
यतिखेर सबैलाई न्याय र अवसरको समावेशी लहर चलेको छ । समान हक र समान रूपले बाँच्न पाउने अवसर । कसैले पनि आफ्नो कामबाट विमुख हुनु नपरोस्, लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल भाका यही नै हो । यस सवालमा चोर र लुटेराहरूलाई यो समान अवसरबाट पाखा लगाउने कुरै आउँदैन । किनभने ती बबुरा पनि त नागरिक हुन् । अतः उनीहरूको तर्फबाट समावेशी दृष्टिले हेर्न हो भने यो लोडसेडिङ बिछट्टै प्यारो छ ।
लोडसेडिङको महान् पर्वले सर्वत्र अँध्यारो छाएका बेला हाम्रा चोर र लुटेरा बन्धुहरूको मुहार भने हर्षले धप्प उज्यालो हुन्छ । अर्थात् अन्धकारले छोपेको ठाउँमै तिनको हातको सफाइले चमत्कारिक उब्जनी गर्न सक्छ । प्यारो लोडसेडिङ नभएको भए यो वर्गको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दैनथ्यो ?
उज्यालो तीन -
देश विकासको मेरुदण्ड उद्योग र कलकारखाना हो । जसरी होस् उद्योग- व्यवसाय हाँक्नुपरेको छ । लोडसेडिङले उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएर मूलगेटमै ढ्याम्म भोटे ताल्चा लागेको खबर जिल्ला-जिल्लाबाट सुनिँदै आइरहेका छन् । तर यसमा घाटोको के नै कुरा ? लोडसेडिङका कारण सबै उद्योग एकपछि अर्को गर्दै धमाधम ठप्प भए पनि त्यही गतिमा मैनबत्ती, ढिब्री, टुकी, दियो इत्यादि उद्योगहरू खुल्न र चल्न थालेपछि औद्योगिक विकासले भरथेग त हुने नै छ ।
लोडसेडिङ हुन थालेपछि आंशिक पिलपिले उज्यालोले तिर्सना मेटाउन भए पनि सर्वसाधारणले मोबाइल फोनसेट किन्नाले त्यसको आयातबाट राज्यले गतिलै राजस्व संकलन गर्नसक्ने देखिन्छ । लोडसेडिङ भएपछि घरघरको मिटरमा पैसो पनि कम उठ्ने र बत्ती बाले पनि नबाले पनि सरकारले पनि निश्चित महशूल निःसङ्कोच लिन सक्ने भएकाले यसले त कमालको दोहोरो लाभ भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा लोडसेडिङको तालिकाअनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली निभाउने नयाँ काम पाउनेहरूलाई बेरोजगार समस्याबाट उन्मुक्ति पाएकोमा मुरी बधाई नदिँदा अन्याय नै हुन्छ । लोडसेडिङको बहारलाई धेरैधेरै बधाईको बहार !
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, March 14, 20105: Comments
Labels: देश-वासी, व्यङ्ग्यविचार, समय-सन्दर्भ
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, March 11, 20109: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, March 08, 20105: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, March 07, 20103: Comments